Ithegi: 2016 | Martech Zone
Ungakanani umxholo okhutshiweyo kwi-Intanethi kwimizuzwana engama-60?
NgoLwesibini, Juni 6, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
uninzi usenokuba uqaphele isuntswana lokuphumla ekuthumeleni kwam kutsha nje. Ngelixa ukupapasha mihla le kuyinxalenye yeDNA yam kule minyaka idlulileyo, ndikwacelwa umngeni ngokuqhubela phambili indawo kunye nokubonelela ngakumbi nangakumbi ngeempawu. Izolo, umzekelo, ndiqhubekile neprojekthi yokudibanisa izindululo ezifanelekileyo zephepha elimhlophe kule ndawo. Yiprojekthi endayifihlayo malunga nonyaka odlulileyo kwaye ke ndathatha ixesha lam lokubhala ndaliguqula laba likhowudi
Uyilo lweWebhu ka-2017 kunye namava eTshintsho lwaMsebenzisi
NgoMvulo, nge-23 kaJanuwari, 2017 NgoMvulo, nge-23 kaJanuwari, 2017 Douglas Karr
Sikonwabele kakhulu ukwakheka kwethu kwangaphambili kwiMartech kodwa sazi ukuba kubonakala ngathi kudala. Ngelixa ibisebenza, khange ifumane ndwendwe zintsha njengoko ibisenza njalo. Ndiyakholelwa ukuba abantu bafikile kule ndawo, bacinga ukuba ibisemva kuyilo lwayo- kwaye bathatha into yokuba umxholo unokuba nawo. Ngamafutshane, sasinomntwana ombi. Sasiluthanda olo sana, sasisebenza nzima kulo
Ngaba unokukhuphisana kuGoogle ngeShishini eliKhulu?
NgeCawa, nge-22 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Ngaphambi kokuba ucaphuke kum kweli nqaku, nceda ulifunde kakuhle. Anditsho ukuba uGoogle akasisixhobo esifanelekileyo sokufumana okanye akukho ntengiso ibuyayo kutyalo-mali kuzo naziphi na iindlela ezihlawulelweyo okanye zokukhangela eziphilayo. Inqaku lam kweli nqaku kukuba ishishini elikhulu lilawula ngokupheleleyo iziphumo zokukhangela eziphilayo nezihlawulelweyo. Besisoloko sazi ukuba ukuhlawulwa ngonqakrazo ngalunye ngumjelo apho imali ilawula khona, yimodeli yeshishini. Ukubekwa kuya kuhlala ku
Ukuseta iMpumelelo yokuThengisa ngo-2017
NgoLwesibini, nge-20 kaDisemba ngo-2016 UStephen Morgan
Ngelixa ixesha leKrisimesi lisenokuba liqhubeka, imibutho yabasebenzi icwangcisiwe kwaye iipayi zokwenza imijikelezo yeofisi, eli ikwalixesha lokucinga ngaphambi kuka-2017 ukuqinisekisa ukuba kwiinyanga ezili-12, abathengisi bazakube bebhiyozela impumelelo bayibonile. Nangona ii-CMO kwilizwe liphela zisenokuba ziyaphefumla emva komceli mngeni ka-2016, ngoku ayiloxesha lokuba ungakhathali. Kwi
Ukunciphisa iinqwelo ezilahliweyo ngeli xesha leholide: Iingcebiso ezi-8 zempembelelo yokuThengisa
NgoLwesithathu, uDisemba 14, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 UCurt Bloom
Kutshanje ndibukele ividiyo yomphathi weThagethi emi encotsheni yokuphuma kwakhe, esenza intetho evuselelayo kubasebenzi bakhe ngaphambi kokuvula umnyango kubathengi abaMnyama ngoLwesihlanu, ehlanganisa imikhosi yakhe ngokungathi uyayilungiselela idabi. Ngo-2016, i-mayhem eyayinguLwesihlanu omnyama yayinkulu kunangaphambili. Nangona abathengi bachitha umndilili weedola ezili-10 ngaphantsi kwaloko benzayo kunyaka ophelileyo, bekukho izigidi ezintathu zabathengi abangakumbi ngoLwesihlanu ngo-2016 kunango-XNUMX